Ma ahan CIQAAB ee maxay tahay sababta dhabta ah uu kaligii tababarka u sameynayay Henrikh Mkhitaryan? – Gool FM
Ma ahan CIQAAB ee maxay tahay sababta dhabta ah uu kaligii tababarka u sameynayay Henrikh Mkhitaryan?
Byare October 31, 2016
(Manchester) 31 Oktoobar 2016. Waxaa la soo ogaaday sababata rasmiga ah ee ka dameysay in Henrikh Mkhitaryan uu kaligii ama si gooni ah ah tababarka ugu sameynayay Carrington HQ mana ahayn ciqaab uu ku riday Jose Mourinho.
Laacibka reer Armenia ayaa shalay la arkayay isagoo baabuurkiisa kala soo baxaya xerada tababarka Man United, warar ayaana soo jeediyay in lagu qasbay inuu kaligii tababarka sameeyo.
Yeelkeede, Manchester Evening ayaa iminka sheeganeysa in laacibka uu isaga doortay inuu kaligii tababarka sameeyo si uu uga shaqeeyo taam noqoshadiisa isla markaana ugu guuleysto sidii uu boos uga heli lahaa shaxda Mourinho.
Mkhitaryan ayaa waxaa ugu dambeysay inuu ka soo muuqdo Red Devils kulankii derby Manchester kolkaa ay guul darro 2-1 kala kulmeen dariskooda bishii la soo dhaafay.
Mustaqbalka 27-jirka ayaa shaki ku jiraa inkastoo ay jirto in Jose uu ku khasiray adduun dhan 30-milyan bound si uu xagaagan uga soo iibsado kooxda Borussia Dortmund .
Jose Mourinho oo malaha ka laabtay go’aanadii uu ku ciqaabayay Bastian Schweinsteiger....(Xiddiga reer Germany oo saakay lagu dhex arkay taababarka waa waynka)+SAWIRRO
SAWIRRO: Gareth Bale oo si rasmi ah u saxiixay heshiiskiisa cusub ee Real Madrid...(Muxuu ka yiri?)